Last updated: Sep. 16 2019 | 3 min akhri
Just toban sano ka hor shukaansiga online ahayd ficil ahaan la kahdo, iyo kuwii ogaado waxa ku saabsan ku fekerey in ay ku heyntu ay noqotay la yaab leh u ahaantii 'halkaas' noocyada ama dad aad ugu baahan oo aan heli karin taariikh ee 'sida caadiga ah'.
Sidee jeer isbeddeleen! Shukaansi Online waa iska caadi ah haatan u mashquul, dadka mustaqbalkiisa maskax, Si kastaba ha ahaatee ma aha oo kaliya dadka ku mashquulsan oo ku soo booday ku tareen shukaansiga online – oh no! Qof kasta oo ka carmal albaabka soo socda si aad Adeer Sam u muuqda in ay u jooga! The jirka ah iyo dhallinyarada, rag iyo dumar ka soo dhammaan qaybaha nolosha, diimaha, jinsiyadaha iyo jeeda u qabanaynaa. Shukaansi Online ayaa ka bedelay wax uun 'Quluubta cidlo' ka fiirsan doono, in uu noqdo hab si dhab ah caadiga ah si ay taariikhda. Xitaa qurux badan u, dadka guul u qabanaynaa, xaq ay weheliyaan dadka kale! Sababtoo ah dhamaanteen waxaan ogaaday sida sahlan waa! Ayado this online u ahaa horumarka dabiici ah.
Sidaas waa maxay faa'iidada iyo khasaaraha shukaansiga online oo run ahaantii aad ka filan karto si aad u hesho jacayl run sidan?
Well qaar ka mid ah faa'iidooyinka waa cad. Waxaad u helaan dad badan oo badan oo ka badan waxaad awoodi doonaan in ay la kulmaan by shukaansi in mid ka mid ah siyaabaha dhaqameed. Oo weliba waxa kale oo ka iman kara Micida ah ee dabada, taasoo la micno ah in ay jiraan dad badan oo kuwaas oo awoodi doona in aad hesho oo laga yaabaa in aan ku Dadeen Hagoogtooda jecel yihiin in ay ku xirmaan. Sidoo kale waxaa jira xaddi gaar ah oo 'bedbedelka degdeg ah' oo iman kara la shukaansiga online, kuwaas oo haddii aanay diyaar u aad u, tegi karo qofka dareensan arrin qalbi jabine.
Waa maxay waxaan ula jeedaa ha by 'bedbedelka degdeg ah'? Well laga yaabo inaad qof hal maalin hadlaya, kaliya in ay iyaga leeyihiin gebi ahaan ku ba'aan ka maqnaayeen hawada soo socda. Tani waa arrin caadi. Waxaad u diri doonaa e-mails in marnaba is ku jawaabay in iyo suurtagalnimada waa in aad yeelan doontaa qaar ka mid ah aad marna jawaabtid midkood. Waa meel fog ka yar shakhsi ka badan qaar ka mid ah arrimaha dhaqanka ee shukaansi iyo tan dhibaya dadka qaar. Waxaan ogaaday waxa ay u muuqdaan in ay ku dhuftey jiilka ka weyn adag, sida loo isticmaalo in ay dhaqanka dheeraad ah oo ku raali geliya of shukaansi dhaqameed, halkaas oo tusaale ahaan kuu sheegi lahaa qof haddii aadan rabin inay mar kale taariikhdana, oo kaliya ma aha sida online in (xitaa haddii aan u malaynayaa in ay noqon waa).
Si kastaba ha ahaatee haddii aad aqbali karo yar Gudigga, Waxaan qabaa waxa ay noqon karaan qalab weyn oo lagula xiriirayo dadka kale, iyo haa xitaa helo jacaylka.
Dabcan waxaa jira wax yar ka yar ka taataabtay iyo ka badan 'rasmi' ah oo ku saabsan xidhiidhka via e-mail, Si kastaba ha ahaatee waxay noqon kartaa tijaabadooda inay arkaan wixii e-mails aad u hesho oo aad la sheekaysatid danaha jacaylka iman kara. Dabcan haddii aad u hesho in ay 'in qof' wajiga dhabta ah shukaansi, romantic si fudud ciyaari karo ka dibna.
Waxaad sidoo kale leedahay in loo diyaar garoobo xaqiiqada ah in aad u badan tahay in la kulmi doontaa dad badan oo aad ku dhicin doona jacayl leh – dhab ahaantii aad xitaa aysan jeclayn! Qof ku dhejin kartaa profile weyn laakiin marka aad ula kulantaan iyaga adduunka dhabta ah xidhiidhka ka kaliya kuma jiro. Sidoo kale iska jir, sababtoo ah waxaa jira qaar ka mid ah kuwa huffan oo online, dadka aan dhab ah oo jira oo kaliya baxay in ay isku dayaan in ay fadeexad aad lacag ama shakhsi faahfaahinta. Ma jiraan wax aad u caadi ah in aan waayo-aragnimo, laakiin ay halkaas ee isku dhafka ah. Sidoo kale waxaa jira dad kuwaas oo ah 'madadaalo' kaliya, oo qof oo ka online raadinaya galmo, oo xataa dadka qaar ay guursadeen oo. Si kastaba ha ahaatee haddii aad awoodi karto taasi oo aanay kaa de dhiirigeliyeen-, markaas waxaad dhab ahaan awooddo kulmaan qof online waa kaamil aad u, iyo kuwaasoo marka aad la kulanto ilaa nolosha dhabta ah, aad la qaybsan karaa jacayl dhab ah la. Waan ogahay in lamaanaha guul badan ee ka soo baxay sidan.
Just inkastoo la xusuusto, ilaa aad ka iyagii la kulmay in qofka aysan ahayn mid dhab.
Sidaas Life Real = Real Love.
Oo waa hal jeer kaliya aad offline iyo nolosha dhabta ah in xiriir run horumarinta karaa xiriirka jacaylka.
5 Ways ahayn in la Tech Baahan